आर्यन र साम्राज्ञीको ‘कायरा’ कस्तो होला ? « Ramailo छ
आर्यन र साम्राज्ञीको ‘कायरा’ कस्तो होला ?
नायक आर्यन सिग्देल र नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह यतिबेला ‘कायरा’ को प्रचारमा व्यस्त छन् । साउन १८ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने यस फिल्ममा आर्यन जय र साम्राज्ञी कायराको भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् । आर्यन र साम्राज्ञीसँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :
आर्यन र साम्राज्ञीले पहिलो पटक एकसाथ ‘कायरा’ मा स्क्रिन सेयर गरेका हुन् । निर्माता समेत रहेका आर्यनले ‘कायरा’को लागि निकै मिहेनत गरेका बताउँछन् । ‘कायरा मेरो करिअरकै महत्वपूर्ण फिल्म हो’, आर्यन भन्छन्, ‘हामीले सक्दो मिहेनत गरेर फिल्म बनाउँने कोशिस गरेका छौं ।’ फिल्ममा आर्यन म्युजिक लभरको रुपमा देखिएका छन् भने साम्राज्ञी प्रेमिका बनेकी छन् ।
‘कायरा’ लाई लक्ष्मण रिजाल निर्देशन गरेका हुन् । निर्देशक रिजालले पनि यो फिल्मलाई आफ्नो डेव्यु फिल्म सरह भनेका छन् । लक्ष्मणले केही वर्ष पहिला फिल्म ‘धुवाँ यो नशा’ बनाएका थिए, जसमा लिड रोलमा आर्यन थिए ।
‘कायरा’को सम्पूर्ण जसो छायाँकन फिलिपिन्समा गरिएको छ । म्युजिकल लभ स्टोरी जनराको फिल्मको केही दिनमा अर्को गीत सार्वजनिक हुँदैछ । आयर्न र साम्राज्ञीको ‘कायरा’ कस्तो होला त ? साउन १८ सम्म प्रतिक्षा गरौं ।